トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ kharashka shaqada inta badan waa qowladda pachinko ah waa adag tahay in la yareeyo si ay macaamiisha
■ Waa maxay bilaabay inuu
ka dib oo dhan qowladda pachinko maamulka, iyo hoos u dhac ku kubad ka soo baxday iibka ah, waa sababta ay tahay danaha shirkadda laga jaray kharashka kala duwan.
In si kale loo dhigo, haddii isticmaalka badan ee kharashka, waxaad la baabbi'in doonaa waa lacag in la dhimay si macaamiisha lacagta iibka. Mararka sida, waxqabadka makarafoon iyo Illuminations, music iyo wixii la mid, sidaas si toos ah in dhumucda tahay, ha ma lagu siri. Ku qor mawduuca
ugu weyn, laakiin waxaa jira kharashka shaqada si ay mid ka mid ah xisaab kuwa miisaanka weyn ee qiimaha Pachinkoya. Tan iyo markii ay timaado baxay waa wax macquul ah in aan la yarayn karaa heshay in ay macaamiisha ah oo halkan aad u badan si ay u isticmaalaan lacagta, laakiin waa in aan loo hubiyo sida mid ka mid ah tilmaamayaasha.
kharashka shaqada ku haboon oo tii pachinko, aad samayn tiro badan loo baahan yahay dadka? dukaamada pachinko
, iyo dukaamada ayaa soo bandhigay nidaam loo tiriyo heshay si toos ah loo yaqaan nidaamka shakhsi, ama sanduuq ka buuxa dhigay kubad sanduuqa dollar ah, marka aad u tagto guriga, weydii in ay socodka yeedhay shaqaalaha ama, waxaa loo qaybin karaa qowladda pachinko nidaamka caadiga ah. Isagoo ka hadlayay shaqada ee shaqaalaha tii pachinko
in nidaamka shakhsi, waxa ay noqon doontaa kaliya ee processing guud ahaan dhibaato. In tii pachinko ka fikirayso la saarayo on adeegga macaamiisha, haatan waxaan lagu soo bandhigay badan. In nidaamka shakhsi, shaqaalaha, iyo ilaalinta hal mindedly jasiiradda ugu, ama digniin ah in haddii aanay jirin macaamiisha laga shakiyo, Yaanay noqon karaa oo kaliya oo ku saabsan in iyo mashiinka pachinko ah nadiifinta ama jawaabta su'aashaada. Sababtoo ah waa
, waxa ay noqon doontaa filan in ay ku riday saddex ka mid ah 300 cutub oo godka ka laba qof. Waxaa intaa dheer, sababta oo ah macaamiisha noo sameeyo oo dhan naftaada by, waxaad okay tirada this dadka, iyadoo aan loo eegin hawlgalka. In qowladda pachinko of sal-dhigida nidaam shakhsiga ah, haddii tirada this ama in ka badan oo shaqaale ah lahaa, waxaa laga yaabaa inaad kharashka shaqada oo aad u badan.
_ qeybsanaan ku xigeenka x000D_, in qowladda pachinko furan oo ku jira nidaamka caadiga ah, waxa ay noqotay arrin in tirada shaqaalaha loo baahan yahay. tii pachinko in nidaamka shakhsi, maxaa yeelay qadarka shaqada inay ku timaado oo dhan kala duwan. In nidaamka caadiga ah, is-dhaafsiga ee lo'da lacag caddaan ah, shaqada kubada ka mid ah sanduuqa dollars gudbiso counter jet, miiska of dhib, pachinko nadiifinta Mashiinka, waxaan leenahay taageero macaamiisha iyo shaqada oo kala duwan. Maadaama aad waxaa lagu fulin doonaa in hawshii
dhammaan shaqaalaha, haddii wax soo saarka kor u kaco, waxa uu noqday shaqaalaha loo baahan yahay by lacagtaas. maanta, marka isagoo tirada shaqaalaha oo kaliya sababtoo ah waa waqti free sidaas, haddii ay hawlgal kasta oo fursad uu noqonayaa wanaagsan, adeega mar dambe underserved doono ugu dhakhsaha badan hoos
. Si looga fogaado wax caynkaas ah, in tii pachinko oo qaadato nidaamka caadiga ah, haddii ay jiraan tiro ka mid ah lagu rakibay oo ku saabsan 300 unug, ka afar ka mid ah lix shaqaale u leeyihiin in ay u socdaan in ay maalin kasta shaqeeyaan.
tani waa, xataa haddii nidaamka this xataa tudhi maalinta aan soo ordaya, doorinin.
Sidaas daraaddeed, in kastoo shaqaalaha qowladda pachinko caadiga ah waxay leeyihiin waqti badan tahay nidaamka, wuxuu noqon doonaa jidkii aan lahayn kharashka shaqada. In howl maalmeedka
ma jirto tii pachinko, dabcan, sababtoo ah waxaa sidoo kale laga yaabaa in istimaalka ee kharashka shaqada ma aslanba odhan, tixgelin guud. Sidaas, xaqiiqada ah in haddii ay jirto istimaalka ah kharashka shaqada, aad bay u kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay nidaamka hordhaca.
Haddii Kakare kharashka badan shaqada, saamaynta soo baxa ee heshay yar ma aha, waa dhab. Ama in qowladda pachinko si ay u tagaan oo aad la, tii pachinko aad isticmaalayso shaqada ku xadgudba kharashka yihiin, isku day in yar oo dhawrid a. Work, miiska of dhib, pachinko nadiifinta Mashiinka, waxaan leenahay taageero macaamiisha iyo shaqada oo kala duwan. Maadaama aad waxaa lagu fulin doonaa in hawshii
Haddii Kakare kharashka badan shaqada, saamaynta soo baxa ee heshay yar ma aha, waa dhab. Ama in qowladda pachinko si ay u tagaan oo aad la, tii pachinko aad isticmaalayso shaqada ku xadgudba kharashka yihiin, isku day in yar oo dhawrid a. Waxaa la socday in ay ka shaqeeyaan.
Haddii Kakare kharashka badan shaqada, saamaynta soo baxa ee heshay yar ma aha, waa dhab. Ama in qowladda pachinko si ay u tagaan oo aad la, tii pachinko aad isticmaalayso shaqada ku xadgudba kharashka yihiin, isku day in yar oo dhawrid a.